Tehirizo 8 euro ny tenanao amin'ny fisintomana ireo rindranasa 3 maimaimpoana ireo mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Miverina amin'ny enta-mavesatra izahay mba hanangona fampiharana vitsivitsy izay mandritra ny fotoana voafetra azo alaina maimaim-poana. Andro vitsy lasa izay dia nampahafantariko anao ny fampiharana ny herinandro izay nofidian'i Apple hisintona maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra, Busy Shapes, fangatahana iray ho an'ny kely indrindra amin'ny trano, eo anelanelan'ny 2 sy 5 taona. Saingy amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hiresaka momba ny fampiharana na lalao ho an'ny ankizy kely isika, fa kosa ho an'ny ray aman-dreny. Ny rindranasa asehonay anao ampidininao anio dia: Tabatach, ny lalao RPG Adventure To Fate ary CloudPlayer Pro.
2 Adventure amin'ny lahatra
Tabatach dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 0,99 euro ary ahafahantsika mifehy ny fanazaran-tena isan'andro ataontsika ao amin'ny gym na ivelan'io. Tabatach dia mamela antsika mamaritra ny elanelam-potoana misy eo amin'ny mahazatra, ny fotoana fitsaharana, ny famerimberenana ...
Adventure amin'ny lahatra
Ao amin'ny Adventure To Fate, manome antsika safidy 8 hanamboarana ny fahaizan'ny toetrantsika isika, miaraka amina asa samihafa 6. Tsy maintsy mandresy ny hery ratsy isika izay nandresy ny batalion-tsika ary nandrava ny fitaovantsika rehetra. Adventure To Fate, manana salanisa 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao. Ity lalao ity Izy io dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro.
Adventure To nasib: Fikatsahana ny ho avy JRPG€ 4,49
Ny fahatongavan'ireo serivisy mozika mivantana dia nanjary mahazatra ho an'ny mpampiasa maro, na izany aza tsy ny rehetra no vonona na afaka mandoa famandrihana isam-bolana. Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay manana tranomboky mozika lehibe ary te-ho afaka mitendry ny mozika ankafiziny avy amin'ny fitaovany, CloudPlayer Pro no rindrambaiko tena mety, izay misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro. CloudPlayer Pro dia mamela antsika hilalao ny tranomboky mozika mivantana avy amin'ny serivisy fitehirizan-drakitra, na Dropbox, Yandex, Google Drive, OneDrive na Box.
CloudPlayer Pro - mpilalao audio avy amin'ny rahona€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Tehirizo 8 euro ny tenanao amin'ny fisintomana ireo rindranasa 3 maimaimpoana ireo mandritra ny fotoana voafetra